Zvishamiso GNU / Linux 2.2 Omega. Kuwedzeredzwa kwesoftware | Linux Vakapindwa muropa
Zvishamiso GNU / Linux 2.2 Omega. Kuwanda kwesoftware
Ini ndinozvibvuma, kumirira kusvika Easter kuti nditsikise ongororo ye distro inonzi MilagrOS, chimwe chinhu chandingaite nemaune. Uye kwete nekuti zviri (iyo kana iri) imwe nzira yakanaka kune avo vanoda kutora mukana wezororo kuyedza Linux, asi nehuwandu hwemitambo yemazwi. Nekudaro, ini handina kunge ndaziva kusvika izvozvi zvezviitiko. Kamwe chete, ini ndaive blogger yakakomba.
1 Iyo purojekiti
2 Zvimiro zveMilagrOS GNU / Linux 2.2 Omega
5 Maonero angu paMilagrOS GNU / Linux 2.2 Omega
MilagrOS GNU / Linux 2.2 Omega ndeye kugadzirisa kweMX Linux, mhuri yevasina kureruka distros iyo inosanganisa kugadzikana uye kuita.
Vagadziri vayo ndeve chirongwa cheVenzuelan mavambo TIC Tac. uyo akambogadzira kugovera kwakanangana nekrispto-mari inonzi MinerOS
Kubva kuTicTac ivo vanotsanangura iyo nyowani distro se:
Chinyorwa chisiri chepamutemo (Respin) cheMX-Linux Distro. Izvo zvinouya nekunyanyisa kugadzirisa, kugadzirisa uye kugadzirisa, izvo inoita kuti ive yakanaka chete kune makumi matanhatu nemasere-makomputa, ese ari mashoma-zviwanikwa (64 GB RAM) uye / kana yekare, pamwe neazvino uye / kana epamusoro-magumo makomputa. Inowanikwa yakanangana nekuva inobatsira kunyanya kune vashandisi vasina kana kushomeka Internet kugona uye / kana kushoma ruzivo rweGNU / Linux, sezvo, ine uzivi hwekushandisa hwerudzi "Turnkey" kana "Isa nekushandisa", iyo inobvumidza iyo, kana yawanikwa (kurodha pasi) uye yaiswa, inogona kushandiswa zvinobudirira uye zvinobudirira pasina kudikanwa kweInternet, sezvose zvaungade uye zvimwe zvakagara zvakaiswa, uye zvakagadziridzwa zvakanyanya, zvakagadziriswa, uye zvakagadziridzwa.
Zvimiro zveMilagrOS GNU / Linux 2.2 Omega
Tinogona kurodha pasi kugovera kwatakakurukura mushanduro mbiri:
MilagrOS Alfa: Iyo inouya neiyo XFCE desktop uye iwe unogona kusarudza kubva kumatatu maneja maneja; FluxBox, OpenBox uye i3. Mufananidzo wacho unorema 2.3 GB
Omega Zvishamiso: Unogona kusarudza nharaunda nhatu dzeDesktop: XFCE, Plasma uye LXQt, uye 3 Mahwindo Mahofisi; FluxBox, OpenBox uye i3, uyu mufananidzo unorema sezvo uchibata 3 GB
Dzese shanduro dzinosanganisira sarudzo yakasarudzika yesoftware yeimba, varaidzo, hofisi, multimedia, kuona uye kuchera mari ye cryptocurrency.
Kuchengetedza kugoverwa kweLinux hakudi nguva chete uye kuzvipira. Zvivakwa zvinodiwa zvakare kurodha pasi kugovera uye kugadzirisa. Vagadziri vakasarudza Mega neGoogle Drive izvo zvisiri izvo zvine hungwaru kana zvakasarudzika sarudzo. Mega inoyambira kuti kana iwe usina account yekubhadhara, kurodha kunogona kubviswa. Kudhanilodha kubva kuGoogle Drayivu kwaikurumidza, asi Linux newbie inogona kunge iine nguva yakaoma yekuziva kuti ndeipi faira raunotora.
Ini zvakare ndakave nedambudziko diki rekutsvaga iyo yekuburitsa ruzivo pawebhusaiti.
Mukudzoka, iyo yekutanga menyu yekuparadzira (iyo yandinotora nhaka kubva kuna amai kugovera) inoyevedza uye yakanaka kunzwisisa. Izvo zvakare zvinokutendera iwe kuti usarudze pakati pezvakasiyana zvakasiyana zvemutauro wechiSpanish uye sarudza nguva yenguva nekutsvaga guta rako.
Kugadzirwa kweiyo yekuisa pendrive naFedora Media Munyori (icho chishandiso chandinoshandisa nguva nenguva) chakaitwa pasina matambudziko. Zvinotora nguva yakajairwa yekugoverwa kweiyi saizi.
Usati watarisana nemararamiro emhando yeMilagrOS, zviri nyore kuverenga zvekare chinangwa chekuparadzira kunoitwa nevagadziri. Ndiko kuti kana iwe ukatarisa pamenyu iwe unowana kuwandisa kwezvikumbiro kune zvese zvinangwa.
Kune mushandisi ane ruzivo uyo anokwanisa kuburitsa maapplication pane kuwedzera iwo, zvinogona kunge zvichishungurudza. Asi, kune avo vatsva kuLinux nyika, zvakanaka. Iko kune kunyange yekuvandudza script inoita kuti zvive nyore kushandisa iyo terminal iyo inogara ichikurumidza kupfuura chero package package.
Iyo yekumisikidza (Yakagara nhaka kubva kuMX) haisi yekuratidzira asi inozadzisa basa rayo rekukuudza zvaunofanirwa kuita uye nekwaunofanira kudhinda.
Maonero angu paMilagrOS GNU / Linux 2.2 Omega
Iko kugoverwa kwakareruka asi nezvose zvaungade (uye pandinotaura zvese, ndinoreva zvese). Dambudziko hombe randiinaro nemarongero akatorwa ndeekuti havatombopa kupa chero chimwe chinhu kunze kweimwe Wallpaper. Asi, MilagrOS GNU / Linux 2.2 Omega inopa yakanakisa software curation kune vashandisi vatsva kana kune avo vanoda kuve nezvose zviripo.. Zvakafanana nekuda kuziva kicheni nyowani uye uwane buffet iyo inobvumidza iwe kuravira ese marudzi kuitira kuti iwe ugone kusarudza gare gare zvaunofarira zvakanyanya.
Tic Tac Project Webhusaiti
Dhawunirodha kubva kuGoogle Drive
Mega yakananga kurodha pasi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvishamiso GNU / Linux 2.2 Omega. Kuwanda kwesoftware
Jose Albert akadaro
Kwaziso, Diego. Ini ndaida yako posvo nezve yedu Distro! Pane zvakawanda zvekutaura, kuyedza uye kushandisa muMilagrOS zvekuti kunyangwe mu2 kana 3 awa vhidhiyo iwe haugone kuita zvese zvizere. Asi muchidimbu, zvinangwa zvikuru ndezvi 2:
a) Ita kuti vanhu vazive kuti iwe unogona kugadzira yako yega Respin, mune yako dhizaini uye yaunoda neMX Linux.
b) Kuti avo vanokwanisa kuzviwana, kurodha pasi kana kuigovana, vane zvese zvavanenge vagadzirira muhupenyu hwemo kana kana vachiisa. Naizvozvo, inoita kuti ive yakakodzera kwazvo kune vanotanga, uye ine shoma kana isina internet.
Zvekare, ndatenda iyo posvo.
Pindura José Albert
Ini handizive, kana iri mxlinux, saka haina kuburitsa chero chivimbo, sezvo ini ndakaisa mxlinux uye ndakaguma ndaiburitsa, nekuti zvisinei nekuti ine mukurumbira sei uye zvisinei nekuti vataura zvakadii, idistro inoshaya yakawanda yekupolisha, ikozvino izvi zvinokundikana iwe, ikozvino watadza imwe yacho, nezvimwe uye pakupedzisira ndakaneta ndikazvibvisa, ndaive nenguva, ndaizvifarira, asi handifarire Distros iyo kamwe kamwe, saka kune zvakanaka zvinhu tanga kubuda. Semuenzaniso, kuwanikwa uye kuiswa kweUSB kwaigara kuri kwakakwana uye kamwe kamwe iwe wakabatanidza chero usb uye haina kuzviona, saizvozvo, pasina kupfuura kweusiku humwe, kana iwe warasikirwa neInternet kubatana, chero chikonzero, saka haina kuisanganisazve ndega, asi zvakare kamwe kamwe, pamberi hongu uye zvakanaka, chimwe chinhu mushure meimwe. Haisi iyo yakabwinyiswa distro. Saka ndakaitsiva ne xubuntu 20.04.2 uye sezvanga zvichitarisirwa chishongo chechokwadi cheCaribbean, isina kana dambudziko rimwe chete, hapana dambudziko kana chero chinhu.
MX LINUX yakanaka, asi izvo chete, zvakanaka. Ini ndinofunga yakawedzeredzwa, SOLIDKX zvakare yakavakirwa paDEBIAN, kune yangu maonero ekuzvininipisa, inoipa chiuru kutendeuka, yakanyanya kugadzikana, yakanaka uye inokurumidza. Zvino chimwe chinhu chekuti hapana nzira yekuzvigadzirisa muMX LINUX, kana uchizoisa FLATPAK, michina yakaturika zvachose, inoyamwa zvese zviwanikwa, uye inotora izvo zvisingaoneke muzvinyorwa. Ndikati, zvakanaka, asi hapana chimwezve.